IMEX Champions Event Technology amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny EventMB Vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » IMEX Champions Event Technology amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny EventMB Vaovao
IMEX sy EventMB
EventMB dia nomena anarana hoe mpiara-miombon'antoka amin'ny haino aman-jery ofisialy IMEX. Ny fiaraha-miasa mandritra ny taona dia ahitana fotoam-pampianarana ao amin'ny IMEX America ary tatitra momba ny fironana lalina mikaroka ny tontolon'ny fanavaozana, ny famolavolana hetsika ary ny teknolojia.
Natao ho an'ny drafitry ny orinasa sy ny masoivoho, ny kilasin'ny fandrindrana hetsika dia natao hanolotra fomba fiasa azo ampiharina amin'ny fandrindrana, fivarotana ary fanaterana hetsika.
Ny fandalinana tranga dia hampiasaina miaraka amin'ny fifanakalozana fomba fanao tsara indrindra.
Misy tatitra momba ny fironana manaraka amin'ity taona ity izay hijery ny firotsahana amin'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny tontolon'ny teknolojia 3D sy VR.
Ny fiaraha-miasan'ny Vondrona IMEX miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina lehibe indrindra amin'ny mpandrindra hetsika manerantany dia manomboka amin'ny Amerika IMEX, natao ny 9-11 Novambra, niaraka tamin’ny fianarana ifanakalozan-kevitra. Ny EventMB Event Innovation Lab™ dia atao amin'ny Alatsinainy hendry, powered by MPI, IMEX America ny andro feno fampianarana maimaim-poana natao ny andro mialoha ny fampisehoana ny 8 Novambra.
Natao ho an'ny drafitry ny orinasa sy ny masoivoho, ny masterclass drafitry ny hetsika dia natao hanolotra fomba fiasa azo ampiharina amin'ny fandrindrana, fivarotana ary fanaterana hetsika, amin'ny fampiasana fandalinana tranga sy fifanakalozana fomba fanao tsara indrindra.
Ny tatitra momba ny fironana dia manaraka amin'ity taona ity izay hijery ny fidiran'ny vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny tontolon'ny teknolojia 3D sy VR. Ny tatitra dia hanazava amin'ny antsipiriany ny fomba nandravan'ny teknolojia virtoaly sy mifangaro zava-misy ny sakana amin'ny fomba idiran'ny vondrom-piarahamonina sy ny fomba hampiharana izany amin'ny hetsika isan-karazany.
Carina Bauer, Tale Jeneralin'ny Vondrona IMEX, dia nilaza hoe: “Fantatsika fa nivoatra tsy misy fepetra ny tontolon'ny teknolojia nanomboka tamin'ny areti-mifindra. Ny vondrom-piarahamonina teknolojia hetsika dia manana fanavaozana ao am-pony ary voatendry handray anjara lehibe amin'ny fanarenana sy fanavaozana ny sehatry ny hetsika fandraharahana. Manantena ny hiara-hiasa amin'ny EventMB izahay mba hizara fomba fanao tsara indrindra sy hanohanana ireo orinasa manao onja eo amin'ny indostriantsika.
Miguel Neves, tonian-dahatsoratry ny EventMB, dia nanampy hoe: "Ny fiaraha-miasa amin'ny IMEX dia mety ho an'ny EventMB. Samy miahy lalina momba ny indostrian'ny hetsika izahay ary mizara fitiavana amin'ny fanavaozana. Efa ela ny IMEX no nikolokolo ny sehatry ny teknolojia hetsika, anisan'izany ny fanampiana ireo vao manomboka miditra amin'ny tsena, zavatra efa nandraisan'ny EventMB anjara taloha. Tsy andriko ny hiara-hiasa amin'ny fomba handresena ny teknolojia izay manohana ny indostria mampientanentana antsika. "
Ny IMEX America dia atao ny 9-11 Novambra ao Mandalay Bay any Las Vegas miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, amin'ny 8 Novambra. Hisoratra anarana - tsindrio maimaim-poana Eto. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny trano fonenana sy ny famandrihana, tsindrio Eto.